Ukuhlaziya > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Isiqinisekiso Sokuxilongwa - Ukuhlolwa kwesifo sikashukela
Ukuhlolwa kwesifo sikashukela: ungalucacisa kanjani uhlobo lwesifo? Uma udokotela esola ukuthi isiguli sinezinga eliphakeme likashukela, umthumela ukuba ayohlolwa isifo sikashukela. ...
Kungani ushukela wegazi ungakhuphuka ngokuya esikhathini futhi ungabhekana kanjani nakho
Imibuzo efanayo futhi enconyiwe. Sawubona, u-Irina Nikolaevna. Ukunyuka okuqhubekayo kokuzila ukudla kwe-glycemia ngenhla kwe-6.1 mmol / l kuphakamisa ukuthi usungule indlela emnene yohlobo 2 sikashukela. ...
I-General Information Proinsulin iyisendlalelo se-insulin, ekhiqizwa amaseli we-pancreatic beta futhi ilawula ushukela wegazi. ...
Yini okufanele uyenze uma i-cholesterol 8: inkomba ye-8
I-Cholesterol 8.0 - 8.9 Kusho ukuthini lokhu, kufanele ukwenze? Cishe wonke umuntu uthathe ukuhlolwa kwegazi kwe-cholesterol okungenani kanye. Kubekelwe izinjongo zokuvimbela, ezisetshenziselwa ukuhlola isimo sempilo yabantu, ukusebenza kahle kokwelashwa. ...
Ungalawula kanjani ushukela wegazi
Ushukela wegazi - okujwayelekile kubantu abadala nasezinganeni (amatafula). ...
Ilebula Yesifo Sikashukela
Ukwehla ushukela wegazi: ungasinqanda kanjani isifo sikashukela? Ukudla okuthile kungadala ama-spikes ushukela wegazi kubantu abanempilo - ososayensi batusa ukubabheka ukuthi bavikele ushukela kanye nezinkinga zalo. ...
Ushukela omncane wegazi - izimbangela nezimpawu kubantu besifazane, emadodeni noma ezinganeni, ekwelashweni nasekuvimbeleni
Ushukela omncane wegazi (hypoglycemia) Ushukela omncane wegazi ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2, kanye nakubantu abanempilo - thola konke okudingayo. Funda ngokuvinjwa, izimbangela, izimpawu, ukuxilongwa kanye nokwelashwa kwale nkinga. ...
Izifundo ze-biochemical ezimweni zokusolwa kwesifo sikashukela okusolwa ngokuhambisana nezincomo ezibonisiwe ze-WHO (Ithebula 4. ...
Ukukalwa kwegazi leShukela emadodeni ngeminyaka: Ishadi Leveli
Izinga Loshukela Wegazi Kwabesilisa Ngeminyaka: Ithebula Lamazinga Ushukela wegazi emadodeni ungahluka empilweni yabo yonke. ...
Izimpawu zesifo sikashukela enganeni eneminyaka engu-7
Izimpawu zesifo sikashukela i-mellitus enganeni eneminyaka engu-7 ubudala. Isifo sikashukela ezinganeni sikashukela ezinganeni sihlotshaniswa nokuphazamiseka kwe-metabolic ngokumelene nesizinda sokuntuleka kwe-insulin. Ngokuvamile kutholakala ukuthi unesifo sikashukela sohlobo 1 kwengane. ...
I-Prediabetes: Ushukela Wegazi: Ukwelashwa KweMetformin
I-Prediabetes: ushukela wegazi, izimpawu kanye nezinga lokuhlaziywa kusuka emunweni Uma isiguli sitholakala sine-prediabetes, izinga likashukela wegazi lisebangeni ukusuka kuma-5,5 kuya ku-6.9 amayunithi. ...
Ushukela (ushukela) egazini ngezinga lama-24-24
24 Ushukela egazini: yiliphi izinga lobungozi kusuka kumayunithi angama-24.1 kuye kwangama-24,9? Uma amanani eglucose egazi ehluka phakathi kwamayunithi angama-3.3-5,5, lokhu kukhombisa ukusebenza okujwayelekile komzimba wonke. ...
Uyini umkhawulo wezinso? Uma izinga likashukela kumchamo likhuphuka kakhulu, izinso, okungukuthi izihlungi zemvelo zomzimba wethu, ziqala ukususa izinto ngokweqile. ...
I-insulin ingaphezu kokujwayelekile ukuthi kusho ukuthini
I-insulin: hlobo luni lwamahomoni, izinga legazi, izinga likashukela nezinye izifo, isingeniso Ngabe uluhlobo luni lolo - i-insulin, okuvame ukubhalwa futhi kukhulunywa ngalo maqondana ne-mellitus yamanje yesifo sikashukela? ...
Ukuhlolwa kwegazi ushukela: izinkomba zokubhaliwe nezimpawu ezijwayelekile
Ukuhlolwa kwegazi ushukela: ukujwayelekile nokuhumusha kwePathology, lapho kuphazamiseka khona emzimbeni we-carbohydrate metabolism (hypoglycemia, ithi prediabetesic), isikhathi esiningi akuveli. ...
Izinhlobo ze-cholesterol ngesikhathi sokukhulelwa nezizathu zeleveli ephezulu yegazi kwizigaba zokugcina
I-cholesterol ngesikhathi sokukhulelwa, okujwayelekile nezimbangela zokwanda Siphakamisa ukuthi ufunde isihloko esihlokweni: "i-cholesterol ngesikhathi sokukhulelwa, okujwayelekile nezimbangela zokwanda" ngamazwana avela kochwepheshe. ...
Okujwayelekile ushukela wegazi kwabesifazane ngeminyaka - itafula lezinga elibucayi
Ushukela wegazi kwabesifazane abaneminyaka engama-20 kuye kwengama-25 ubudala. Abantu abanesifo sikashukela kufanele baqaphele ngokuhlelekile inani leshukela egazini labo futhi bathathe izilinganiso ezijwayelekile. ...
Izinga le-hemoglobin le-glycosylated labanesifo sikashukela esinempilo
Isimo se-glycated hemoglobin HbA1c Ososayensi bathole ukuthi ukuze kuncishiswe izinkinga zesifo sikashukela, kuyadingeka ukuthi kulondolozwe isilinganiso se-glucose (i-glycated hemoglobin HbA1c ejwayelekile engaphansi kuka-7.0 mmol / L. ...
Yiliphi izinga likashukela wegazi elijwayelekile ezinganeni?
Yiliphi izinga likashukela wegazi elijwayelekile ezinganeni? Isimo soshukela wegazi ezinganeni kungenye yezinkomba ezibaluleke kakhulu zesimo sabo sempilo. ...